Malunga nathi - Henan SinoDiam International Co., Ltd.
IHenan SinoDiam International Co, Ltd.
Njengobunjineli, imveliso, kunye nenkampani yedayimani yentengiso, simele "njengoMboneleli weSisombululo kubathengi beDayimani bamanye amazwe".
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava edityanisiweyo kwimizi-mveliso yedayimani kunye noshishino lokutyabeka okusansimbi, iSionDiam inobutyebi bolwazi kunye nobuchule obungenakuthelekiswa nanto. Sisebenzisa la mava ukubonelela iinkampani kunye nabantu ngabanye ngemveliso esemgangathweni kunye nezinto abanokuthembela kuzo.
Sisebenza ngokusondeleyo kunye nabathengi ukuseka iimfuno zabo zedayimani ephezulu, okukhokelela ekubeni abathengi bethu bafumane ezona mveliso zifanelekileyo kwizicelo zabo. Oku, kunye nobudlelwane bethu namandla emveliso kunye nozinzo lomgangatho, kusivumela ukuba siqinisekise ukuba abathengi bethu abaxabisekileyo bafumana eyona mveliso ifanelekileyo ngexabiso elikhuphisanayo.
SinoDiam eneemfuno ezizodwa R & D, imveliso kunye nokuthengiswa yemveliso umgubo diamond, micron diamond nedayimani iimveliso. Imveliso yeemveliso igubungela iimodeli ezingaphezu kwe-100 ezifana nelebhu ye-HPHT ekhulile yedayimani, ibhondi yesinyithi yabona idayimani, i-Metal bond crystalline kunye ne-non-crystalline mesh size diamond, i-resin bond mesh size diamond, i-diamond kunye ne-diamond micron diamond, i-CBN, i-Metallic Coating, I-polycrystalline diamond compact (PDC), i-polycrystalline diamond (i-PCD), i-diamond polishing compound kunye ne-powders zentsimbi esele zenziwe ngaphambili.
Isicelo sibandakanya idayimane yobucwebe, idayimane yokusika isarha, i-diamond coring bits, i-wiring yedayimani, iivili zekomityi yokusila, i-diamond ipolishi kwikhonkrithi, ilitye, i-Metal bond, i-bond eqinisekisiweyo, i-resin iboshwe kunye nazo zonke iintlobo zeemveliso ze-electroplating, ukulungiselela amatye ingxubevange, izinto ngemagnethi, idayimane yendalo, gem. Iibhanti ze-PDC ze-oyile kunye nokumbiwa kwemigodi.
Ukongeza, siyaqinisekisa ukuba sihlala siphambili kumzi mveliso ngokusebenzisa itekhnoloji yakutshanje. Qiniseka ukuba nokuba ufuna ntoni, ungaxhomekeka kuthi ukuba sinikezele ngeyona nto intle, zijolise ekubeni yinkokeli yesisombululo sedayimani yoshishino esinikezela kubagcini behlabathi.